ဟားငါး​ကောင်ရဲ့ ဟဒယသပိတ် ​တော်လှန်​ရေးအငြိမ့် ကို… – PVTV Myanmar
·5months ago ·34 Comments
ဟားငါး​ကောင်ရဲ့ ဟဒယသပိတ် ​တော်လှန်​ရေးအငြိမ့် ကို
မနက်ဖြန် (၁၅.၀၈.၂၀၂၁) တနင်္ဂနွေ​နေ့ ည ၈ နာရီအချိန်မှာ PVTV နဲ့ D-Day Channel တွေမှာ
အာဏာရှင်ကို​တော်လှန်ရင်း စိတ်ခွန်အား​တွေပြည့်​စေဖို့ ဟားငါး​ကောင်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
Like – 49K Share – 12703
Âuñg Kyáw says:
2021-08-14 at 8:54 PM
အရင်က အားမပေးဘူးပေမယ့် ခု အားပေးမယ် 👍
2021-08-14 at 9:02 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ် ပါ…ပြည်သူအများစိတ်နှလုံး….အေးချမ်းကြပါစေ
2021-08-14 at 9:29 PM
Sandar Mcc says:
I can’t wait to see them. Sending ❤️
အရင်က ဟားငါးကောင်တွေ ဘာတွေ မသိခဲ့ဘူး
အခုရော နောက်ရော တကယ်အားပေးတော့မယ်
2021-08-14 at 9:50 PM
Chan A Win says:
2021-08-14 at 10:24 PM
ဟားငါးကောင်ရဲ့ အငြိမ့်ကချင်တယ် ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတာဝမ်းသာမိ
OhnMar Sein says:
2021-08-15 at 10:06 AM
channel link​လေး ​ပေးကြပါ 🙏🙏🙏
Phãÿ Wîñ says:
အား​ေပး​တယ္​ ၾကည္​့ဖို႔ ​ေစာင္​့​ေန​ေမ
Lin Latt says:
အရင်ထဲက အားပေးတယ် အခုတော့ ပိုအားပေးရမယ်😘😘😘😘😘
2021-08-15 at 11:41 AM
2021-08-15 at 12:14 PM
Khin Aye Mhar says:
2021-08-15 at 12:51 PM
D day channel
Shun Lett says:
Nay Zar ဒီည
ပိုး မီ ယဉ် says:
2021-08-15 at 1:30 PM
Pvtvနဲ့ mrtv ချချ555
စောင့်နေမယ် ချစ်ဆုံးတွေကို ကြည်မယ် အားပေးတယ် လေးစားတယ် ကျန်းမာကြပါစေ
2021-08-15 at 1:50 PM
ကျေးဇူးပါ ငါတို့ ပြည်သူလူထုကလဲ ရတဲ့ နည်းနဲ့ တိုက်ထုတ်မှာပဲ
2021-08-15 at 3:00 PM
Mizzima TV ကနေကြည့်လို့ရမလား
2021-08-15 at 4:12 PM
2021-08-15 at 6:04 PM
စောင့်မျှော် အားပေးလျှက်ပါ ခင်ဗျား
Kyal Sin Soe says:
2021-08-15 at 6:38 PM
Nway Ya Tu says:
2021-08-15 at 7:19 PM
DVB တို့ mizzima tvတို့ကနေလည်း လွှင့်စေချင် Tv ပဲ ကြည့်တဲ့ လူကြီးတွေ ကြည့်စေချင်လို့
Ko Thu Lay says:
2021-08-15 at 8:26 PM
Mizzima tvလိုင်းကနေ အခုကြည့်လို့ရနေပါပြီဗျ
Pĥýő Ĝÿî says:
2021-08-15 at 9:17 PM
Jat Job says:
အရေး တော်ပုံ အောင် ကို အောင်မြင်ရမည်။ 💯💯💯
Zin Nyein Lay says:
2021-08-15 at 10:01 PM
2021-08-15 at 10:22 PM
Francis Dee Dee MJ says:
2021-08-16 at 1:13 AM
ခုလိုတင်ဆက်ပေးလို့ ကျေးဇူးလည်း အရမ်းတင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ ငဗစ်ဒဏ်ကြောင့်စိတ်တွေဝေဝါးနေချိန်၊နေထိုင်စားသောက်မူတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေချိန်၊ စစ်ဘေးကြောင့် အိုးအိမ်မေ့နေကြချိန်၊ ရေဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရချိန်၊ တောထဲတောင်ထဲ အပင်ပန်းခံ စစ်အာဏာရှင်မျိုးရိုးတွေကို တွန်းလှန်းဖို့ လေ့ကျင့်နေကြတဲ့ PDF များ၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအားလုံးတွက်….ခင်ဗျားတို့ ဟား ၅ ကောင်အဖွဲ့က ခွန်အားပေးလိုက်သလိုပဲ….
မအလများ…ဆွေ ၇ ဆက် မျိုး ၇ ဆက် ကိစ္စရပ်များအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းကြပါစို့လား….
2021-08-16 at 5:58 AM
အစက အထင်ကြီးခဲ့တာ ဇွဲအငြိမ့်
ဘာတဲ့..ပျော်ပျော်ကြီး စျေးရောင်းကြရအောင် ဆိုပါလား
Khinkhin Hla says:
2021-08-16 at 8:51 AM
2021-08-17 at 1:46 AM
Koko Saw says:
2021-08-18 at 9:32 PM
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်း နှင့် အမျိုးသားညီညွတ…